यिनै हुन् - ओलम्पिकमा विश्वलाई चकित पारेकी नेपाली खेलाडी ‘गौरिका सिंह’ – सम्मान स्वरुप एक सेयर गरौँ ! -
Home जीवनशैली यिनै हुन् – ओलम्पिकमा विश्वलाई चकित पारेकी नेपाली खेलाडी ‘गौरिका सिंह’ –...
यिनै हुन् – ओलम्पिकमा विश्वलाई चकित पारेकी नेपाली खेलाडी ‘गौरिका सिंह’ – सम्मान स्वरुप एक सेयर गरौँ !
सन् २०१६ मा ब्राजिलमा सम्पन्न ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगितामा नेपाल चर्चामा रह्यो। विश्वभरिका करोडौं मानिसले एकसाथ प्रत्यक्ष रुपमा हेरेको रियो ओलम्पिक–२०१६ मा नेपाली खेलाडीको उपस्थितिले विश्वबजार तातेको थियो।
हुनपनि १३ वर्षकी बालिकाले विश्वको सबैभन्दा ठूलो खेलकुद प्रतियोगितामा सशक्त प्रतिष्पर्धा गर्दा त्यसको चर्चा नहुने कुरै भएन। हो, पौडीमा विश्वभरिका सर्वोत्कृष्ट खेलाडीहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्दैथिइन्, नेपालकी पौडीबाज १३ वर्षीया गौरिका सिंह। धेरैलाई पत्यारै लागेको थिएन कि, १३ वर्षीया किशोरीले त्यति उत्कृष्ट खेल प्रस्तुत गर्छिन् भन्ने। तर, गौरिकाको खेल विश्वभरिका मिडियामा प्रमुख समाचार बन्यो। र, यसरी नेपाली खेलाडीले रचेको इतिहासको विषयमा विश्वभरि नै चर्चा भयो।
११ हजार खेलाडीको सहभागिता रहेको ओलम्पिकमा गौरिकाको उपस्थितिको चर्चा अलग रह्यो। उनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा रियो ओलम्पिकले परिचित गरायो। यसमा गौरिकाको कडा मिहेनत र आत्मविश्वासले पनि धेरै हदसम्म काम गरेको छ।
‘कान्छी खेलाडी’को करामत – ब्राजिलमा २ वर्षअघि भएको विश्व खेलकुदको महाकुम्भ ओलम्पिककी सबैभन्दा कान्छी खेलाडी गौरिका सिंह नेपाली खेलजगतकै लागि प्रेरणा हुन्। बाल्यावस्थाबाटै बेलायतमा रहँदै आएकी गौरिकाले डाक्टर, इञ्जिनियर, पाइलट आदि बन्ने सपना देखिनन्। बरु खेलाडी भएर नेपालको नाम राख्ने संकल्प गरिन्। बेलायत पुगेर पनि किन पौडी खेलाडी नै बन्ने निर्णय लिनुभयो त? ‘यो मेरो हवी हो,’ गौरिकाले एक वाक्यमै उत्तर दिइन्।
१३ वर्षकै उमेरमा पौडीबाट ओलम्पिकमा सहभागी उनी ११ हजार बढी प्रतिस्पर्धीमाझ आकर्षणको केन्द्र थिइन्। सन् २००२ को नोभेम्बर २६ तारिखका दिन जन्मिएकी हुन्। गौरिकाकी आमा गरिमा राणा सिंह वि.सं. २०५० सालमा एसएलसी परीक्षाको बोर्ड टपर हुन्। र, बुवा डा. पारसबहादुर सिंह चाहिँ लण्डनस्थित रोयल फ्री अस्पतालमा कन्सल्ट्यान्ट युरोलोजिष्टको जिम्मेवारीमा कार्यरत रहेका छन्।
गौरिका बाल्यावस्थाबाट पौडीप्रति आकर्षित भएकी थिइन्। र, निरन्तर प्रयासबाट अहिले उनी विश्वकै सफल खेलाडी बन्ने मार्गतर्फ अग्रसर छिन्। बसाइ लण्डनमा, सेवा नेपालको – नेपालकी उदीयमान पौडी खेलाडी गौरिका सिंह लण्डनमै बस्छिन्। गौरिकाले पौडीमा फड्को मार्ने कारण पनि विश्वस्तरीय अभ्यास नै हो। उनको अध्ययन पनि बेलायतमै चलिरहेको छ।
गौरिका २ वर्षको उमेरमै आमाबुवासँग स्कटल्याण्ड गइन्। त्यँहाको स्कूलमा पढ्न थालिन्। साथै पौडी खेल्न पनि शुरु गरिन्। समयको अभावका कारण र त्यहाँको जीवन शैलीका कारण उनलाई नेपाली भाषा बोल्न गाह्रो लाग्छ। गौरिका राष्ट्रियता तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागिता जनाइसकेकी छिन्। ओलम्पिकमा भाग लिनुअघि नै सात वटा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाइसकेकी थिइन्। रियो ओलम्पिकअघि नै उनी सबैभन्दा बढी फिना प्वोइन्ट ल्याउने नेपाली पौडी खेलाडी थिइन्।
त्यसपछि पनि नेपाली खेलकुदका लागि उनी निरन्तर लागिरहेकी छिन्। सन् २०१६ मा भारतको गुवाहटी र सिलोङमा भएको १२औं सागमा उनले सहभागिता जनाएकी थिइन्। चार वटा विधामा नै उनले पदक जितेकी छिन्। उनले एक रजत र तीन कास्य जितेकी थिइन्। गौरिकाले आगामी दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका तयारीमा लागिरहेको र पदकहरु जित्ने अठोट पनि व्यक्त गरेकी छिन्।
त्यसैगरी, सन् २०२० मा जापानमा हुने ओलम्पिक खेलकुदमा क्वाटरफाइनलसम्म पुग्ने लक्ष्य गौरिकाले राखेकी छिन्। ‘त्यही अनुरुप अभ्यास गरिरहेकी छु,’ उनले भनिन्। अधिकांश समय सधैं अभ्यासमा – पौडीबाज गौरिका सिंह प्रत्येक साता ५० घण्टाभन्दा धेरै समय पौडी खेल्छिन्। उनका अनुसार बिरामी हुँदा पनि पौडी खेल्नै पर्छ। गौरिका सातामा ८ देखि ९ सेसन स्वीमिङ अभ्यास गर्छिन्।
र, हरेक सेसन २ देखि ३ घण्टासम्म चल्छ। साताको चार दिन बिहान अभ्यास हुने भएकाले सबेरै ५ बजेसम्ममा उनी स्वीमिङ पुल पुगिसक्छिन्। उनी हरेक साता ३१ देखि ४८ किलोमिटर स्वीमिङ गर्छिन्। पढाईलाई प्राथमिकता – गौरिका शनिबार, आइतबार स्वीमिङ प्रतियोगिता छैन भने परिवारसँग बसेर फुटबल हेर्ने गर्छिन्। उनलाई पौडीबाहेक फुटबल मन पर्छ। उनलाई खाना पकाउन र नेल आर्ट गर्न पनि मनपर्छ। उनी पप गीत सुन्छिन्। विशेषगरी, एड सेरनको।
गौरिकाको प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिन हाई क्यालोरीयुक्त र ब्यालेन्स डाइट आवश्यक पर्छ। गौरिका खेलका साथै पढाईमा पनि अब्बल छिन्। प्रशिक्षणका कारण थकान लागेपनि उनले पढाईलाई प्राथमिकता दिन्छिन्।
सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा – गौरिका सिंह दयालु र कोमल हृदयी छिन्। उनी आफूसँग भएको रकम समाज सेवामा खर्च गर्छिन्। विशेषतः बालबालिकाहरुलाई सहयोग गर्दै आएकी छिन् उनले। खेल जितेपछि प्राप्त हुने रकमको केही प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयको विकासमा लागेको एक संस्थालाई प्रदान गर्ने उनले बताएकी छिन्। उनले भनिन्, ‘सबैले पढ्न पाउनुपर्छ, हामीले सक्दो सहयोग पुर्याउनु हाम्रो दायित्व हो।’